'एमालेले धेरै हन्डर खायो, घेराबन्दी तोड्न सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्छ' - कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
मंसिर १, २०७८ फोटो र भिडियो: अंगद ढकाल
नेकपा एमाले स्थायी कमिटीका सदस्य विष्णु रिमाल अहिले दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन कमिटीका सचिव छन् । एमालेले आयोजना गर्ने अधिकांश ठूला कार्यक्रमको व्यवस्थापनमा रिमालको भूमिका हुने गरेको छ ।
रिमालसँग मंसिर १० देखि १२ सम्म चितवनमा हुने महाधिवेशनको तयारी र पार्टीको नयाँ नेतृत्वको विषयमा ईकान्तिपुरका मणि दाहालले गरेको कुराकानी ।
रौनक त गोदावरीमा छँदै थियो नि ! सञ्चार माध्यमहरुले हाम्रो कार्यक्रमलाई 'ग्रेट हल अफ द पिपुल्स'सँग तुलना गरेर समाचार आएकै हो । त्यसैले रौनक आ- आफ्नो समयको हुन्छ । एमाले सकियो भनेको समयमा जुरुक्क उठेको देखियो नि ! त्यो नै रौनक हो ।
प्रकाशित : मंसिर १, २०७८ १९:२७
कांग्रेस म्याग्दीको सभापतिमा गर्बुजा निर्विरोध निर्वाचित
काठमाडौँ — कांग्रेस म्याग्दीको सभापतिमा खमवीर गर्बुजा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । बुधबार भएको जिल्ला अधिवेशनले गर्बुजालाई निर्विरोध सभापतिमा चयन गरेको हो ।
सभापति पदमा गर्बुजाको मात्रै उम्मेदवारी परेका कारण गर्बुजा निर्विरोध निर्वाचित भएको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत निरञ्जन राजभण्डारीले जानकारी दिए । उनी यसअघि पनि जिल्ला सभापति नै थिए । ‘सभापतिमा उहाँको मात्रै उम्मेदवारी दर्ता भयो । कसैको दाबी/विरोध परेन,’ उनले इकान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसैले उहाँ नै सर्वसम्मत सभापति बन्नुभएको छ ।’
गर्बुजा सभापति शेरबहादुर देउवानिकट मानिन्छन् । अन्य पदहरुमा भने एकभन्दा बढीको उम्मेदवारी परेको छ । ‘उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय बिहीबार बिहान ८ बजेसम्म छ । सहमतिको प्रयास गर्छौ भन्नुभएको छ, सहमति भएन भने निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउछौँ,’ निर्वाचन अधिकृत राजभण्डारीले भने ।
प्रकाशित : मंसिर १, २०७८ १९:२१